धेरै सपना बुनेर विदेशीएका दलबहादुरका दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि …. « Sajha Page
धेरै सपना बुनेर विदेशीएका दलबहादुरका दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि ….
पाल्पा : विदेशबाट कमाएर परिवारलाई खुसीका साथ पाल्ने सपना सझाएर स्याङ्जाको कलिगण्डकी–४ का दलबहादुर विक गत पुसमा ओमन गए। तर, ओमन पुगेको एक महिना पनि टिक्न पाएन उनको सपना। साहुबाट लिएर ऋण तिर्ने सपना बोकेर ओमन गएका ३० वर्षीय विक पैसा कमाउन पुगेको एक महिनामा नेपाल पर्कनु पर्‍यो।
‘जिन्दगी खुसी र सुखी बनाउने भनेकै श्रीमान हुँनुहुँदो रहेछ’ , ताराले भनिन्,‘उहाँ बाँचे मेरो लागि त्यही नै खुसी हुन्थ्यो त्यसैले मृगौला दिन लागेकी छु। मसँग भएको मृगौला त दिने भएँ। तर, पैसा भएन।’
दलबहादुरलाई विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा अहिलेसम्म तीन लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। बुबा चुरामणिका अनुसार छोराको उपचार गर्न अझै पाँच लाखभन्दा वढी खर्च लाग्ने छ। उनको उपचारका लागि परिवारले सहयोगको याचना गरेका छन्। उनका बुबा चुरामणिले छोराको उपचारमा सहयोग गरिदिन सबैलाई आग्रह गरे। थाहा खबर